Home AFRICAN STARS Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny sariohatry ny baolina kitra izay fantatry ny olona amin'ny anarana; 'Moh'. Ny tantaran-tantaran'i Victor Moses Childhood Plus ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Voalohany alohan'ny hanombohantsika, dia mendrika ny manamarika fa ny tantaran'i Victor Moses dia dian-tongotra, herimpo, fikolokoloana, asa mafy ary zotom-po mba hivoatra. Mamelà ahy;
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana tany am-boalohany
Victor Moses Childhood Sary
Victor Moses dia teraka tamin'ny Des 12, 1990 tany Lagos, Nigeria mankany amin'ny rainy, Pastor Austine Moses sy ny reniny, Andriamatoa Josephine Moses (Both Late). Ny ray aman-dreniny dia misiônera izay niaina tany amin'ny Kaduna State, Nizeria. Niteraka azy ireo nandritra ny fahanterany. Victor dia nobeazina tao amin'ny finoana kristianina hentitra izay nanjary ivon'ny fiainany nandritra ny taona nahalehibe azy. Nandany ny fahazazany nandritra ny fahazazany izy ary nijery ny ray aman-dreniny nitory ny filazantsaran'Andriamanitra tamin'ny olona maro. Pastora sy Andriamatoa Mosesy dia Kristianina navitrika izay anisan'ny hetsiky ny fambolena any Nizeria.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ny fahafatesan'ny ray aman-dreny tamin'ny alalan'ny korontana tao Kaduna
Pastor Austin sy Mrs Josephine Moses
Ny fihetsik'izy ireo evanjelika dia nandrisika ny fitiavana an'Andriamanitra. Tany Kaduna, nitory ny filazantsara izy ireo ary nahita ny filan'ny olombelona tsy misy fanavakavahana. Takatr'izy ireo fa mety hampihatra sy hanaparitaka ny finoany any amin'ny faritra tsy mahafinaritra. Saingy ny zavatra iray dia tsy azo antoka. Tsy fantatr'izy ireo fa hihaona amin'ny fahafatesany izy ireo rehefa milalao ny mpanelanelana amin'ny fametrahana fifandirana eo amin'ny kristianina sy ny silamo. Izany no nitranga tamin'ny Kaduna Muslim / Christain Riot izay namoy ny ainy tamin'ny taona 2000.
Taratasy momba ny Riotin'i Kaduna:
The 2000 Kaduna fikomiana dia revolisiona ara-pivavahana in Kaduna izay ahitana ny kristiana sy ny silamo manoloana ny fampidirana ny lalàna sharia ao amin'ny fanjakana Kaduna, Nizeria. Ny hetsika dia nahitana ady mafy teo amin'ny Miozolomana sy ny Kristiana izay naharitra tamin'ny 21st febroary hatramin'ny 23 May 2000. Manodidina ny 5,000 ny fahafatesana dia voarakitra. Pasitera Austin sy Josephine Mosesy dia anisan'ireo aloha mba ho faty.
Ahoana no nanombohan'ny taonan'ny 2000 Kaduna:
Raha tamin'ny volana febroary 2000, governoran'i Kaduna dia nanambara ny fampidirana ny sharia ho an'ny Kaduna State, izay tsy an'ny Miozolmana no mahavita ny antsasaky ny mponina. Ny sampan'i Kaduna ao amin'ny Fikambanan'ny Kristiana ao Nizeria (CAN) dia nanao hetsi-panoherana ho fanoherana azy io tao an-tanànan'i Kaduna. Nifandona tamin'izy ireo ny tanora Miozolomana ary nifamotoana ny toe-draharaha, niaraka tamin'ny herisetra sy fandringanana goavana teo amin'ny roa tonta.
Ny herisetra dia nitranga tamin'ny onja roa lehibe (indraindray antsoina hoe "Sharia 1" sy "Sharia 2"). Ny onja voalohany dia avy amin'ny 21 ka hatramin'ny 25 Febroary, miaraka amin'ny famonoana hafa tamin'ny Martsa, arahin'ny onja faharoa avy amin'ny 22 ka hatramin'ny 23 Mey. Victor Ray dia namoy ny ray aman-dreniny tamin'ny onja voalohany.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Misaora ny fahafatesana ary manaova mpitsoa-ponenana
Ny mpihira Nizeriana dia 11 rehefa namoy ny ainy tamin'ny herisetra ara-pivavahana ny ray aman-dreniny. Ity zava-niseho mahatsiravina ity dia nitranga nandritra ny taona 2000, nandritra ny revolisiona Miozolomana sy kristiana tany amin'ny fanjakana Kaduna, Nizeria. Ny ray aman-drenin'i Victor dia novonoin'ireo tanora Miozolomana izay nikendry azy ireo ho mpitarika ny hetsika kristiana tao amin'ilay faritra. Soa ihany ho an'i Victor, tsy tao an-trano izy rehefa nitranga ilay zava-nitranga. Nivoaka izy nilalao baolina kitra niaraka tamin'ny namany tany amin'ny tanàna lavitra. Natahotra izy rehefa nandre izay nitranga tamin'ny ray aman-dreniny. Ankoatra ny fahatairana dia nampahafantarin'i Victor koa fa tokony ho lasibatra manaraka izy. Nisy ny faniriana hamongotra ny fianakaviany manontolo amin'ireo Miozolomana ireo. Ho setrin'ity fandrahonana ity, naman'ny namana Victor ho any amin'ny toerana miafina izy mba hampitony ny toe-draharaha. Izany no nahatonga azy ho mpitsoa-ponenana.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Tonga ho mpitsoa-ponenana
Ny fitsabahan'ny governemanta Britanika no nampitony ny toe-draharaha tao Kaduna. Niditra an-tsehatra izy ireo tamin'ny fanekena ireo mpitsoa-ponenana vitsivitsy avy ao Kaduna. Victor dia nekena satria fantatr'ireo ray aman-dreniny maty nandritra ny asa fitoriana diplomatika nandritra ny rotaka. Taorian'ny zava-nitranga nahatsiravina dia nifindra monina tany Royaume-Uni i Victor ary nifindra tany. Nahazo dadatoa niorina izy izay nanohana azy.
Nanaiky hikarakara azy ny fianakaviana iray avy any South London. Tonga tany Angletera izy tamin'ny taona 11. Araka ny voalazan'i Victor Moses, "Toa toa lanitra ny Angletera. Tsapako fa afaka nahita ny ray aman-dreniko tany aho. Toerana tsy nampoizina ahy izany. Any aoriana dia lavitra an'i Kaduna. Raha vao tonga aho dia tsy nahalala an'izany mihitsy aho "
Raha mbola tany Londona, dia nofenoina ny nofiny hanohy ny baolina kitra ary ho lasa kintan'ny baolina kitra.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Lasa mpitsoa-ponenana mpitsoa-ponenana / mpitsoa-ponenana.
Ny fijanonana ho any Grande-Bretagne ho mpangataka fialokalofana dia nankasitraka an'i Mosesy. Rehefa tonga tany Grande-Bretagne izy dia nanatrika ny Sekoly Ambony Teknolojian'i Stanley (fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Harris Academy) any South Norwood.
Victor Moses sy ireo namany baolina kitra ao Harris Academy
Raha tao izy dia nilalao baolina kitra tao amin'ny klioban'ny baolina fandaka izy talohan'ny nandraisan'i Cosmos FC ho an'ny ligin'ny baolina kitra any Tandridge.
Taorian'ny nankafiziny lanja lehibe tamin'ny lalao baolina kitra tao amin'ny Ligy Tandridge teo an-toerana ho an'i Cosmos 90FC, nanatona azy ny Crystal Palace na dia mbola any am-pianarana aza izy. Ny kianjan'i Crystal Palace FC, Park Street Selhurst dia tany an-dalambe lavitra ny sekoliny. Nihira ho azy ireo teo ambany sehatry ny 14. Nanjary nalaza i Mosesy voalohany tao amin'ny 14 rehefa nahatratra ny tanjona 100 ho an'ny Crystal Palace eo ambany pejy 14. Izy dia nanampy ny klioba hahazoana kaopy maromaro. Tao anatin'ny farany iray, nanome baiko ny tanjona dimy rehetra nanohitra an'i Grimsby tao amin'ny kianja Walkers, Leicester.
Victor Moses tamin'ny taona 14. Ny tantaram-pitiavana tsy manam-pahataperana
Izy no 14 taona ihany tamin'izany fotoana izany, ny lehiben'ny tale, Tony Loizi, no namaritra azy "Mpilalao iray azonao zaraina avy amin'ny iray amin'ny iray tapitrisa. Izy dia tahaka an'i Cristiano Ronaldo avy amin'ny klioba " hoy Loizi.
Victor Moses dia nanana fotoana tsy hay hadinoina tao amin'ny klioba. Anisan'izany ny fotoana iray nakana baolina hatreny am-paosiny, mametraka ny baolina amin'ny tongony, ary mamadika azy eo amin'ny lohany ary mamely azy indray. Nalahelo mafy ilay zazakely raha nanala baraka azy tanteraka izy.
Araka ny voalazan'i Mosesy,
"Avy eo dia nanatona ilay renin'ilay zaza ary nokapohiny tamin'ny lohany ny lohako. Nanontany ahy izy, nahoana aho no nanala baraka ny zanany lahy? ... "
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Rising to Fame
Taorian'ny nandaozan'i Charles N'Zogbia, dia novidina i Moses ary nanjary fanombohana tsy tapaka an'i Wigan tao amin'ny fizaran-taona 2011-12. Niseho tamin'ny 74 izy ary nahatratra ny tanjona 8. Izy no nigadra farany an'i Chelsea tamin'ny fanatontosana ny fahavaratra, taorian'ny Eden Hazard, Marko Marin sy Oscar.
Victor Moses tonga tao Chelsea FC
Ny fahatongavany ao Chelsea dia manamarika andian-dalam-panatanterahana amin'ny fikatsahana ny hahatongavana amin'ny lalao amin'ny lalao, na dia manjavona aza izy raha ampitahaina amin'ny dia lavitra ataony amin'ny lozam-pifamoivoizana manokana.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Mbola nalahelo ny ray aman-dreniny izy
Victor Still dia nalahelo nandritra ny fotoana vitsivitsy, indrindra rehefa nilalao ho an'ny tanindrazany, Nizeria.
Victor Still dia nalahelo ny ray aman-dreniny.
Ny fahatsiarovana mampalahelo momba ny Riotin'i Kaduna, ny fahafatesan'ny ray aman-dreniny ary ny fomba nijaliany indraindray dia nanatona azy.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Namela an'i Nizeria
Na dia novonoina tany Nizeria aza ny ray aman-dreniny fony izy mbola zatovo tao 11years taloha, dia tsy nanakana azy tsy hamaly ny antso patriarika ary nifidy ny hilalao an'i Nizeria rainy.
Raha efa nilalao tamin'ny ekipan'ny tanora tao Angletera izy ireo ary hita ho kintana ho avy, dia nametraka olana maromaro momba ny fankatoavana an'i Angletera ny fampiharana an'i Victoria mba handaminana ny zom-pirenena. Ny fikambanan'ny filoham-baolina kitra, ny FIFA dia namoaka ilay fanenjehana taorian'ny nanambarany azy imbetsaka. Nafahana izy tamin'ny farany tamin'ny nilalaovana an'i Nizeria tamin'ny volana novambra 2011. Izy no nandray anjara voalohany tao Nizeria 6-1 nandresy an'i Liberia tao Calabar mba hahalavorary ny kalitaon'ny 2013 African Nations Nations.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana sy fifandraisana
Ilay mpilalao baolina talenta dia manambady sy mitahy amin'ny ankizy roa. Ny voalohany, Brentley Moses dia teraka tamin'ny volana septambra 2012.
Brentley Moses - Victor Mosesy Zanaka
Manana zanakavavy koa izy, Nyah Moses izay teraka tamin'ny Febroary 2015.
Victor Moses zanakavavy-Nyah Mosesy
Mihevitra ny zanany ho sariaka vintana ho azy izy ary mankalaza mandrakariva ny fotoana mahafaly miaraka aminy.
Victor Moïse dia tian'ny olona hitazona ny fifandraisany amin'ny mombamomba azy ary noho izany antony izany dia tsy tiany ny miresaka momba ny mombamomba azy manokana. Tsy nanambara izy fa manambady izy na tsia? Tsy nanokatra ny vavany ihany koa i Victor fa na izy na iza na iza dia mampiaraka amin'olona na tsia. Na izany aza, ny tatitra dia manondro fa ilay sipakely Jamaikana eto ambany no renin'ny zanany.
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ny Antonio Conte
Ny talentan'i Victor Moses dia navoakan'i Antonio Conte tao Chelsea. Nanomboka teo dia lasa tsotra ny làlany ho lasa fantsom-pahatongavana any amin'ny Stamford Bridge. Ny fiakarany tampoka dia zavatra mampalahelo an'i Jose Mourinho.
Victor Moses- Avy amin'ny Grass to Grace
Nanomboka nanao fifanarahana vaovao i Mozika vao haingana mba hitazonana azy any West-Londres mandra-pahatongan'ny 2021 izay heverina ho mendrika ny £ 100,000-isan-kerinandro.
Ny fizarana 2016 / 2017 dia ny taona nitondrany tao Chelsea. Ny faharetany ihany koa dia tsy nahitam-bokany. Araka ny voalazan'i Mosesy,
"Ho an'ny klioba iray izay ho avy aminao dia hampiasa anao izy ireo amin'ny fotoana iray. Fantatro fa misy mpilalao marobe ao Chelsea saingy raha azoko ny vintako dia tsy maintsy maka izany fotsiny aho. "
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ny toetrany sy ny fisainany
Mazava ho azy fa saro-kenatra i Mosesy. Tiany ny miteny amin'ny feo britanika sy madio. Ny fisainany tokana sy ny tanjaky ny toetrany dia miharihary ary mora ny mampifandray azy amin'ny fomba izay niaretany ny trauma tamin'ny fahazazany.
Heveriny ihany koa ny fisaintsainana ireo taon-jaza fony izy nilalao baolina niaraka tamin'ny ambim-bavany tany amin'ny arabe Kaduna dia mbola vaovao. "Tsy nisy kiraro aho. Tsy afa-baraka izahay ary rehefa nisy baolina kely nianjera teo an-tongotra ary nanomboka nilalao baolina izahay. " tsaroan'i Mosesy
Ity ny Victor Moses LifeBogger Rankings raha nahazo fikarohana maro.
Adam Lallana tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa